International war — Steemit
godenlight (35) in esteem •2years ago
နည်းပညာကုမ္ပဏီများမှနီးပါး 670 မှတ်တဲ့အမြတ်ဖို့ Dow Jones စက်မှုပျှမ်းမျှ powered သောကျယ်ပြန့်ဆန္ဒပြပွဲများ၏အများကြီးအဘို့မှတ်။ မိုက်ကရိုဆော့ဖနီးပါး 8 ရာခိုင်နှုန်းတက်ပြီး, အကြီးမားဆုံး 30-ကုမ္ပဏီ Dow အတွက်ရရှိနှင့် Standard & Poor ရဲ့ 500 အညွှန်းကိန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘဏ်များလည်းနှောင်ကြိုးအထွက်နှုန်းတစ်ဦးပစ်ကပ်ကနေအကျိုးအမြတ်, အစိုင်အခဲအကျိုးအမြတ် notched ။ လက်လီရောင်းသူများ, လူသုံးကုန်ကုမ္ပဏီများနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစတော့ရှယ်ယာကြီးတွေရရှိအကြားခဲ့ကြသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကုန်သွယ်ရေးအပေါ်တစ်ဦးထက်ပိုသောအကောင်းမြင်အလားအလာများနှင့်ဝယ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများအတွက်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကရဲ့ Jitter ကုန်သွယ်အဖြစ်စျေးကွက်ပြန်တက်နှစ်နှစ်အတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထိတ်များအတွက်အဆိုးဆုံးရက်သတ္တပတ်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ "စင်စစ်ဘာမျှအခြေချရဲ့" ရော့ Haworth အမေရိကန်ဘဏ်ကြွယ်ဝမှုစီမံခန့်ခွဲမှုမှာအကြီးတန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟာဗျူဟာကဆိုသည်။
"ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနေဆဲတစ်ခွက်တစ်ဝက်-အပြည့်အဝစျေးကွက်နှင့်အပြုသဘောဆောင်တဲ့စီးပွားရေးကိုအတိုင်းဤကြည့်ရှုနေကြပါတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဤအရပ်၌တန်ဖိုးကိုအပေါ်ကိုဝယ်ကြည့်ဖို့အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး, သူတို့ရဲ့ရာထူးပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကြိုးစား dips အပေါ်ကိုဝယ်ကြလော့။ " အဆိုပါ Standard & Poor ရဲ့ 500 အညွှန်းကိန်း 2,658.55 မှ 70,29 အချက်များ, ဒါမှမဟုတ် 2.7 ရာခိုင်နှုန်း, ထလေ၏။ အဆိုပါ Dow Jones စက်မှုပျှမ်းမျှ 24,202.60 မှ 669,40 အချက်များ, ဒါမှမဟုတ် 2.8 ရာခိုင်နှုန်း, ရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ Dow ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကထက်ပိုမို 1400 ရမှတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်ယခုနှစ်အဘို့ဆင်းအနည်းငယ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Nasdaq 7,220.54 မှ 227,88 အချက်များ, ဒါမှမဟုတ် 3.3 ရာခိုင်နှုန်း, ကဆက်ပြောသည်။
သေးငယ်-ကုမ္ပဏီစတော့ရှယ်ယာများ၏စယ် 2000 အညွှန်းကိန်း 1,543.72 မှတက် 33,63 အချက်များ, ဒါမှမဟုတ် 2.2 ရာခိုင်နှုန်း, ခူး။ အားလုံး S & P 500 သည်, Dow ပြောသည်နှင့် Nasdaq အနည်းငယ်ပိုပြီးကြာသပတေးနေ့နှင့်သောကြာနေ့စျေးကွက်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှု၏ထက်ဝက်ထက်တက်အောင်, သြဂုတ်လ 2015 ကတည်းကသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးတစ်ရက်အကျိုးအမြတ်တင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Donald Trump နည်းပညာမူဝါဒအကျော်အငြင်းပွားမှုအတွက်တရုတ်ကုန်စည် $ 60 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိအပေါ်တာဝန်ကြေညာခဲ့သည်ပြီးနောက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်တစ်ခုကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲ၏စိုးရိမ်မှုတွေထွက်ပေါ်နေပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကသိသိသာသာကျဆင်းခဲ့သည်။ သောကြာနေ့တွင်, ဘေဂျင်းသံမဏိနှင့်လူမီနီယံသွင်းကုန်တခုတခုအပေါ်မှာအစောပိုင်းကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခွန်တိုးမြှင့်ကျော်တတ်နိုင်သမျှလက်တုံ့ပြန်မှုအဘို့ကိုပစ်မှတ်ထားသောအမေရိကန်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု $3ဘီလီယံစာရင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒါကအငြင်းပွားမှုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကုန်သွယ်မှုစိတ်ကျရောဂါနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးပြန်လည်နာလန်ထူပြန်မသတ်မှတ်စေခြင်းငှါ, စိုးရိမ်မှုတွေသတိပေးခံရ။ တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရသည်ဝါရှင်တန်နှင့်ညှိနှိုင်းဖို့ပွင့်လင်းကပြောပါတယ်ပြီးနောက်သူများသည်စိုးရိမ်မှုတွေ, တနင်္လာနေ့လျှော့ချ။ အဲဒီကြေညာချက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရာရှိများစျေးကွက်-ဖွင့်လှစ်တောင်းဆိုမှုများများစာရင်းကိုတင်သွင်းခဲ့ကြကြောင်းညွှန်ပြနေတဲ့သတင်းအစီရင်ခံစာနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ တစ်ဦးကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ, ဟွာ Chunying က The Wall Street Journal ကအားဖြင့်အစီရင်ခံစာအတည်ပြုပေမယ့်တစ်ဦးကိုပုံမှန်တွေ့ဆုံပွဲတွင်ပြောသည်ဘူး "တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနဲ့ဆွေးနွေးမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏တံခါးကိုအမြဲဖွင့်ထားသည်။ " တရုတ်က Trump ရဲ့အခွန်အဆိုပြုချက်တုံ့ပြန်မယ်ဘယ်လိုပြောသေးပါဘူး။ ဒါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ '' ပြန်ခေါင်းထောင်လာသောအကောင်းမြင်တနင်္လာနေ့လြော့ဖို့ပေါ်လာခဲ့ပါဘူး။ "သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့အစိတျအပိုငျးအပေါ်အခွန်၏ဤကြေငြာမယ့်ညှိနှိုင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သို့မိမိအပုံမှန်ဖွင့်လှစ် salvo ခဲ့," Randy ဖရက်ဒရစ်, ချားလ်စ် Schwab မှာကုန်သွယ် & အနကျအဓိပ်ပါယျ၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားခဲ့သည်။
"သူကအတိတ်ကာလတွင်ဤအမှုတို့ကိုပြုလျက်, စျေးကွက်, ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြကြသည်တူသောအခုကြည့်ရဲ့ '' ဟုတ်တယ်, အဲဒါပဲဖြစ်ပျက်နေတာတွေပါပဲ။ " ဤအတောအတွင်း, တောင်ကိုရီးယားများအတွက်ထိပ်တန်းကုန်သွယ်မှုညှိနှိုင်းရေးအမျိုးသားတို့ကိုနှစ်နိုင်ငံသူတို့ရဲ့ခြောက်လနှစ်အရွယ်ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ပြင်ဆင်ရန်ကွိုတငျပွငျဆငျအဖြစ်နောက်ထပ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရန်၎င်း၏အော်တိုစျေးကွက်ဖွင့်လှစ်ရန်သဘောတူခဲ့သည်တနင်္လာနေ့ကပြောပါတယ်။ နည်းပညာကုမ္ပဏီများသည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကထိုကဏ္ဍရဲ့ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုအချို့ကို recouped ။ Microsoft က $ 93,78 မှ $ 6,60, ဒါမှမဟုတ် 7.6 ရာခိုင်နှုန်း, ထလေ၏။ နှောင်ကြိုးအထွက်နှုန်းမြင့်တက်အဖြစ်ဘဏ္ဍာရေးထိတ်မြင့်တက်။ သူတို့ငွေချေးအဘို့ထိုသူတို့ပိုပြီးအမြတ်အစွန်းအောင်, ပေါင်များနှင့်အခြားချေးငွေများအပေါ်အတိုးနှုန်းတက်မောင်းသောကွောငျ့ higher အထွက်နှုန်း, ဘဏ်များအဘို့ကောင်းပါတယ်။ အမေရိကဘဏ်၏ $ 30,44 မှ $ 1.27, ဒါမှမဟုတ် 4.4 ရာခိုင်နှုန်း, ကဆက်ပြောသည်။
10 နှစ်အရွယ်ဘဏ္ဍာရေးအပေါ်အထွက်နှုန်းနှောင်းပိုင်းတွင်သောကြာနေ့ 2,81 ရာခိုင်နှုန်းကနေ 2,85 ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည်။ အိမ်-တိုးတက်မှုလက်လီအရောင်းဆိုင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် CEO ဖြစ်သူရောဘတ် Niblock အနားယူနေသည်ဟုဆိုသည်ပြီးနောက် Lowe ရဲ့ 6.6 ရာခိုင်နှုန်းကိုတက်။ စတော့ရှယ်ယာ $ 89,30 မှ $ 5,53 ရရှိခဲ့သည်။ Facebook က Android ထုတ်ကုန်ထံမှဖုန်းနံပါတ်နှင့်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများကိုစုဆောင်းအကြောင်းကိုအသစ်သောမေးခွန်းများကိုခြင်းဖြင့်အစပျိုးကာအစောပိုင်းဆလိုက်ဖျက်ခြင်းပြီးနောက်အနိုင်နိုင်ပိုမိုမြင့်မားအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဖက်ဒရယ်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်ကကုမ္ပဏီစားသုံးသူဖို့ "မတရားလုပ်ရပ်များက" အကြောင်းရင်း "သိသိသာသာဒဏ်ရာ" တွင်စေ့စပ်ရှိမရှိအပါအဝင်ဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ privacy ကိုအလေ့အကျင့်အားစုံစမ်းစစ်ဆေးကြောင်းတနင်္လာနေ့ကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ စတော့ရှယ်ယာ $ 160,06 မှ 67 ဆင့်, ဒါမှမဟုတ် 0.4 ရာခိုင်နှုန်း, တစ်အမြတ်ထုတ် eked ။ ကုန်သည်ကြီးများမှာလည်းနောက်ဆုံးပေါ်ကော်ပိုရိတ်သဘောတူညီမှုသတင်းတနင်္လာနေ့ကသူတို့မျက်စိရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအားကစားကုန်ပစ္စည်းများလက်လီအရောင်းဆိုင် JD အားကစားဖက်ရှင် PLC ခြင်းဖြင့်ဝယ်ယူခံရဖို့သဘောတူညီခဲ့ပြီးနောက် Finish ကိုလိုင်း $ 13,83 မှ $ 3.28, ဒါမှမဟုတ် 31,1 ရာခိုင်နှုန်း, vaulted ။ အဆောက်အဦးထုတ်ကုန်ကုမ္ပဏီ Knauf ထံမှရှယ်ယာနှုန်း $ 42 တန်ဖိုးရှိတစ်ဦးကမ်းလှမ်းမှုပယ်ချပြီးနောက်အမေရိကန်အစိုးရကော်ပိုရေးရှင်း $ 40,03 မှ $ 6,52, ဒါမှမဟုတ် 19.5 ရာခိုင်နှုန်း, ခုန်တက်။ benchmark အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရေနံစိမ်းဟာနယူးယောက် Mercantile ချိန်းတွင်စည်နှုန်း $ 65,55 မှာအခြေချရန် 33 ဆင့်ကျဆင်းခဲ့သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစားသုံးဆီစျေးရန်အသုံးပြု Brent ရေနံစိမ်း, လန်ဒန်မြို့တွင် $ 70,12 မှာပိတ်ဖို့ရန် 33 ဆင့်သွန်းလောင်း။ သည်အခြားစွမ်းအင်အနာဂတ်ကုန်သွယ်မှာတော့အပူကိုဆီနည်းနည်း $ 2,02 တစ်ဂါလံမှာပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ လက်ကားဓာတ်ဆီ $ 2.01 တစ်ဂါလံ2ဆင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ 1,0 နှုန်း $ 2,623ဆင့်ကဆက်ပြောသည်
aamayrikaan nhang tarote koneswalrayy hcaitpwal ko shawin lwhaell nineraan nyhainhaine hphoet pw int lainn hpyitkyaungg satainnmyarr hcyaayykwat htaat pomo nhaitnhait aatwat ၎inneat aakaunggsone nae k payy kam hkyinn nhaint ၎inneat kyeemarrsaw soneshonemhu noutsone raatsattapaat eat htaatwaat hkan hpyethkyinn, tanainlarnae tait u waal hkanhcarrhkyet aatwat rainnnhaeemyahuutnhaansuumyarr htarr tawmuueat . naeepanyar kumpanemyarrmhaneeparr 670 mhaat tae aamyathphoet Dow Jones hcaatmhu pyahammyaha powered saw kyaal pya ant sandapyapwal myarreat aamyarrkyeeabhhoet mhaat . mite k ro sothpaneeparr 8 rarhkinenhuann taatpyee, aakyeemarrsone 30-kumpane Dow aatwat rashinhaint Standard & Poor rae 500 aanywhaann kein hpyithkaesai . bhanmyarr laee nhaawinkyaoe aahtwatnhuann tait u pait kaut k nay aakyoeaamyat,ahcine aahkellaakyoeaamyat notched . laatle raungg suumyarr, luusonekone kumpanemyarr nhaint kyannmarrayyhcaungshoutmhu hc tot shalyar kyeetway rashiakyarr hkaekyasai . rainnnhaeemyahuutnhaansuumyarr koneswalrayy aapaw tait u htaat po saw aakaunggmyin aalarraalar myarr nhaint waalhphoetahkwinalam myarraatwat pyeehkae saeet aapaatkarae Jitter koneswal aahpyit hcyaayykwat pyantaat nhaitnhaitaatwin aamayrikaanpyihtaunghcu htate myarraatwat aasoesone raatsattapaat noutshoet lite kyaeat . " hcainhcait bharmyaha aahkyayhkya rae" rot Haworth aamayrikaan bhan kyawalwamhu hceman hkaant hkwal mhumhar aakyeetaann rainnnhaeemyahuutnhaanmhu maharbyauuhar k sosai . " rainnnhaeemyahuutnhaansuumyarr naysell taithkwat taitwaat-apyanyaw hcyaayykwat nhaint aapyusabhawsaungtae hceepwarrrayy ko aatine i kyi shu naykyapartaal, dar kyount suuthoetko i aaraut taanhpoeko aapaw ko waal kyany hphoet aan sya hcarar tot mahoteparbhuu, suuthoetrae rarhtuu pyanlai taisout ninehphoetkyaoehcarr dips aapaw ko waal kyalot . " aasopar Standard & Poor rae 500 aanywhaannkein 2,658.55 mha 70,29 aahkyetmyarr, darmhamahote 2.7 rarhkinenhuann, ht layeat . aasopar Dow Jones hcaatmhu pyahammyaha 24,202.60 mha 669,40 aahkyetmyarr, darmhamahote 2.8 rarhkinenhuann, rashihkaesai . aasopar Dow pyeehkae saeet aapaatk htaatpomo 1400 ramhaat soneshone hkaer hkyinn nhaint yahkunhaitabhhoet sainn aanaeengaal naysell hpyitpartaal . aasopar Nasdaq 7,220.54 mha 227,88 aahkyetmyarr, darmhamahote 3.3 rarhkinenhuann, k saatpyawwsai . sayy ngaal- kumpane hc tot shalyar myarreat hcaal 2000 aanywhaannkein 1,543.72 mhataat 33,63 aahkyetmyarr, darmhamahote 2.2 rarhkinenhuann, hkuu . aarrlone S & P 500 sai, Dow pyawwsainhaint Nasdaq aanaeengaal popyee kyaarsapatayynae nhaint sawkyaarnae hcyaayykwat rae soneshonemhu eat htaatwaat htaat taat aaung, syagotel 2015 kataeek suuthoetrae aakaunggsone taitraat aakyoeaamyat tainhkaesai . ninengantawsammat useinhcein Donald Trump naeepanyar muuwardakyaw aangyinnpwarrmhu aatwat tarotekonehcai $ 60 bheleyan taanhpoeshi aapaw tarwaan kyay nyar hkaesai pyeenout kambharlonesinerar hc tot shalyar hcyaayykwat taithku koneswalrayy hcaitpwal eat hcoerainmhutway htwatpawnay pyeehkae saeet aapaatk sisisarsar kyasainn hkaesai . sawkyaarnaetwin, bhaygyinn sanmani nhaint luu me ne yan swinkone tahku tahku aapawmhar aahcawpinek aamayrikaanpyihtaunghcu aahkwan toemyahaint kyaw taatninesamyaha laat tonepyanmhuabhhoet ko paitmhaathtarr saw aamayrikaan konepahchcaeetaithku $3bheleyan hcarrainnko htotepyanhkaesai . dark aangyinnpwarrmhu kambhar tait wham koneswalmhu hcatekyarawgar nhaint kambharlonesinerar hceepwarrrayy pyanlai narlaan htuu pyan m saatmhaat hcay hkyinn nghaar, hcoerainmhutway satipayyhkanr . taroteninengan aahcoer sai warshintaan nhaint nyhainhaine hphoet pw int lainn k pyawwpartaal pyeenout suumyarrsai hcoerainmhutway, tanainlarnae shothkya . aellde kyaynyarhkyet aamayrikaanpyihtaunghcu aararshimyarr hcyaayykwat- hpw int lhait taunggsomhumyarr myarr hcarrainnko tainswin hkaekyakyaungg nywhaan pya nay tae satainn aahcerainhkanhcar noutshoet lite kyaeat . tait u k ninenganhkyarrrayywaankyeehtarn pyawwrayysohkwinshi suu, hwar Chunying k The Wall Street Journal k aarr hpyint aahcerainhkanhcar aataipyu paymaae tait u ko ponemhaan twaesonepwaltwin pyawwsaibhuu " twaesoneswaynwayrayy nae swaynwaymhumyarr aatwat kyawanotethoeteat tanhkarrko aamyaell hpw int htarrsai . " tarotek Trump rae aahkwan aasopyuhkyet tonepyan maal bhaallo pyaww sayyparbhuu . dark rainnnhaeemyahuutnhaansuutway '' pyan hkaungghtaung larsaw aakaunggmyin tanainlarnae lyaww hphoet pawlar hkaeparbhuu . " sammat u seinhcein raeahci tyaapongya aapaw aahkwan eat i kyay ngyaar m ae nyhainhaine hkyinn lotengaann hcain shoet mimiaponemhaan hpw intlhait salvo hkae," Randy hp raatdrait, hkyarrlit Schwab mharkoneswal & aanakyaaadhiutparyya eat dutiyukkatht k pyawwkyarrhkaesai . " suu k aatate karlatwin iamhu thoetko pyu lyet, hcyaayykwat, kyawantawthoet ko pyawwpya kyasai tuusaw aahku kyirae '' hotetaal, aelldarpell hpyitpyet naytartway parpell . " iaatawaatwin, taungkoreeyarr myarraatwat htiuttaann koneswalmhu nyhainhainerayy aamyoesarrthoet ko nhaitninengan suuthoetrae hkyawwatl nhaitaarwal koneswalrayy sabhawtuunyehkyet pyinsainraan kwo tangyapw ngya sangya aahpyit nouthtaut aamayrikaanpyihtaunghcu raan ၎inneat aawto hcyaayykwat hpw int lhait raan sabhawtuu hkaesai tanainlarnae k pyawwpartaal . naeepanyar kumpanemyarr sai pyeehkae saeet aapaatk hto kand rae kyeemarrtae soneshonemhuaahkyahoetko recouped . Microsoft k $ 93,78 mha $ 6,60, darmhamahote 7.6 rarhkinenhuann, ht layeat . nhaawinkyaoe aahtwatnhuann myinttaat aahpyit bhandarrayy htate myinttaat . suuthoet ngwayhkyaayyabhhoet hto suuthoet popyee aamyat aahcwann aaung, paung myarr nhaint aahkyarr hkyaayyngwaymyarr aapaw aatoenhuann taat maungg sawkwayarngya higher aahtwatnhuann, bhanmyarrabhhoet kaunggpartaal . aamayrikabhaneat $ 30,44 mha $ 1.27, darmhamahote 4.4 rarhkinenhuann, k saatpyawwsai . 10 nhaitaarwal bhandarrayy aapaw aahtwatnhuann nhaawinnpine twinsawkyaarnae 2,81 rarhkinenhuann kanay 2,85 rarhkinenhuann myinttaat hkaesai . aain- toetaatmhu laatle aaraunggsine ukkathtanhaint CEO hpyitsuurawbhaat Niblock aanarryuu naysaihu sosaipyeenout Lowe rae 6.6 rarhkinenhuann ko taat . hc totshalyar $ 89,30 mha $ 5,53 rashihkaesai . Facebook k Android htotekone htanmha hponenanparat nhaint hcarsarr maatsae hk ya myarrko hcusaungg aakyaunggko aasait saw mayyhkwannmyarrko hkyinn hpyint aahcapyoe kar aahcawpine s lite hpyethkyinn pyeenout aaninenine pomo myint marr aasonesaat hkaesai . aasopar hpaatdaraal koneswalrayy kawmashink kumpane hcarrsonesuuhphoet " matararr loterautmyarr k" aakyaunggrainn " sisisarsar danrar" twin hcaehcaut shimashi aaparaawain soshal medeyar kumpanekyeerae privacy koalaeakyint aarr hconehcamhcaitsayy kyaungg tanainlarnae k aataipyu pyawwkyarrhkaesai . hc totshalyar $ 160,06 mha 67 saint, darmhamahote 0.4 rarhkinenhuann, tait aamyathtote eked . konesaikyeemyarr mharlaee noutsonepaw kaw po rate sabhawtuunyemhu satainn tanainlarnae k suuthoet myethci shihkaepartaal . aasopar aarrkahcarr konepahchcaeemyarr laatleaaraunggsine JD aarrkahcarrhpaatshin PLC hkyinn hpyint waalyuu hkanr hphoet sabhawtuunyehkaepyeenout Finish koline $ 13,83 mha $ 3.28, darmhamahote 31,1 rarhkinenhuann, vaulted . aasouta u htotekonekumpane Knauf htanmha shalyarnhuann $ 42 taanhpoeshi tait u kamlhammhu paalhkya pyeenout aamayrikaanaahcoerakawporayyshinn $ 40,03 mha $ 6,52, darmhamahote 19.5 rarhkinenhuann, hkonetaat . benchmark aamayrikaanpyihtaunghcu raynanhcaim harnayuuyout Mercantile hkyane twin hcainhuann $ 65,55 mhar aahkyayhkyaraan 33 saint kyasainn hkaesai . aapyipyisinerar hcarrsonese hcyaayy raanaasonepyu Brent raynanhcaim, laandaanmyahoettwin $ 70,12 mhar patehphoetraan 33 saint swann laungg . sai aahkyarr hcwmaain aanargaat koneswal mhartot aapuu ko senaeenaee $ 2,02 tait garlan mhar pyaungglell swarrhkaesai . laat karrdharatse $ 2.01 taitgarlan2saint soneshone hkaerasai . sabharwadharatngwae 1,0 nhuann $ 2,623saint k saatpyawwsaiinterna